बैंकमा निक्षेप संकलन झन् घट्दै, कर्जाको माग धान्नै नसक्ने ! - Arthatantra.com
बैंकमा निक्षेप संकलन झन् घट्दै, कर्जाको माग धान्नै नसक्ने !
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव भएसँगै बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्न ब्याजदरको हतियार प्रयोग गरेपनि त्यो कमजोर भएको छ ।
बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएसँगै निक्षेप तान्न बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्याए । तर त्यसले काम नगरेको तथ्याङकले देखाएको छ । असोज १ गतेदेखी बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरे । जसमा बचत तथा मुद्दति निक्षेपको ब्याज निकै बढेको छ । तर बचतकर्ताको ध्यान त्यता जान सकेको छैन । असोज पहिलो साताको तथ्याङक हेर्दा बैंकमा निक्षेप संकलन ह्वात्तै घटेको छ ।
बैंकर्स संघका अुनसार असोज ८ गतेसम्म बैंकहरुले ९ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ३१ अर्ब कर्जाको माग देखिएको छ । यो हेर्दा बैंकको निक्षेप निकै कम र कर्जाको माग धान्नै नसक्ने गरी बढेको देखिएको छ । संघका अनुसार ब्याजदर नबढेको समयमा भदौ अन्तिमसाता निक्षेप संकलन २६ अर्ब र कर्जाको माग २८ अर्ब अर्थात निक्षेप र कर्जाको माग उस्तै उस्तै थियो ।
असोज ८ गतेसम्म आईपुग्दा कर्जाको माग ह्वात्तै बढेको छ भने निक्षेप संकलन निकै घटेको देखिएको छ । असार ८ गतेसम्म बैंकहरुले ४१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा कर्जाको माग ३९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
वि.सं.२०७८ असोज ११ सोमवार १६:४२ मा प्रकाशित
अघिल्लाे वर्ल्ड रेमिटबाट एनआईसी एशिया बैंकको खातामा रकम पठाउँदा ४ सय रुपैयाँ बोनस
पछिल्लाे दशैंमा कुमारी डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई विशेष छुट